Zvinyorwa zveAlbert Nieto pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Albert Nieto
Mbeu yembeu ndiyo inotungamira yeContextual Yekushambadzira Kambani inogadzira zvine mutsindo uye inogadzirisa mhinduro dzezvakakodzera zvekuona zvemukati, kusimbisa kunongedzera uye kudzoka kune vaparidzi vepamusoro nemhando dzakanakisa. Mamiriro ezvinhu ekambani AI anotendera mabhureki kusangana nevatengi mukati mezvese zvavo zvekufarira pane isina-kuki hwaro.
Google nguva pfupi yadarika yakazivisa kuti iri kunonoka hurongwa hwayo hwekubvisa echitatu-bato makuki muChrome browser kusvika 2023, gore rinotevera kupfuura zvayaironga pakutanga. Nekudaro, nepo chiziviso chinganzwa senge nhanho yekudzokera kumashure muhondo yekuvanzika kwevatengi, iyo indasitiri yakafara inoramba ichienderera mberi nehurongwa hwekurerutsa kushandiswa kwewechitatu-bato makuki. Apple yakatanga shanduko kuIDFA (ID yeVashambadzi) sechikamu cheiyo iOS 14.5 yekuvandudza, iyo